Blog ahia kacha mma
Blog ahia kachasị mma!
Enwere ụfọdụ blọọgụ ahịa dị ukwuu n'ebe ahụ, mana ọ ga-amasị m ikwere na ihe anyị jikọtara ọnụ bụ isiokwu kachasị mma na isiokwu niile. Anyị bụ ndị kacha mma? Ọ gaghị ekwe omume ịgbagha, ọ bụghị ya? Chọpụta - anyị nwere ike ahu nagide ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha, na-eso ụzọ, Fans na-amasị na-agbalị iji chọpụta… ma nke ahụ abụghị ihe na-egosi nke kasị mma, nke ahụ bụ ihe na-egosi ọkacha mmasị or kasị ewu ewu.
Ikwu na ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị kachasị mma nwere ike ịbụ otu n'ime usoro nkwalite kasịnụ maka ebumnuche ole na ole:
Ndi mmadu kwere ya. Ndị mmadụ ga-enye gị uru nke obi abụọ na uche chọrọ ikwere n’ihe ị na-ekwu bụ eziokwu. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mụtara nke a ogologo oge gara aga… kwuo ihe ndị ntuli aka chọrọ ịnụ, wee mee ihe ọ bụla ịchọrọ mgbe ị banyere n'ọfịs.
Obu amuma onwe ya. Sị na ị kachasị mma ga-abụ eziokwu ma i kwenye ya. Na-amalite ijide onwe gị n'ọkwa dị elu ma hụ mgbe niile na ị kwụpụrụ n'etiti ndị asọmpi.
Ọ na-etinye asọmpi ahụ na nchebe. Ka ị na-aga n'ihu na-erite uru nke ịbụ onye kachasị mma, asọmpi gị ga-anwa igosipụta na ha anọghị n'ọnọdụ nke abụọ.
A juru m n’izu a ma ọ bụ na nke a bụ ụzọ aghụghọ. Anaghị m akwado aghụghọ, ana m eleda ndọrọ ndọrọ ọchịchị anya. Kama, m na-agba ndị mmadụ ume na ụlọ ọrụ ka ha jiri aka ha zụọ ahịa dịka ndị kachasị mma - ma nyefee atụmanya ahụ.
Ezigbo ihe atụ nke a bụ otu Mee Ego Online nke ndị na-ere ahịa n'ịntanetị. Ọ bụghị naanị na ha na-akwalite saịtị na akụ ha dị ka ihe kachasị mma, ha na-etinyekwa ego dị ukwuu n'ịmepụta mmadụ na ha bụ ndị kasị nwee ihe ịga nke ọma n'ịntanetị. (Onwe, Echere m na ahịa ha ka mma karịa nsonaazụ na itinye ego na ọrụ ha… mana nke ahụ bụ echiche m.)
Gịnị na-egbochi gị iji usoro a? Kọwaa ihe ị kachasị mma ma bido ịkwalite ya taa.
Video: Social Mgbanwe Mgbanwe 2
Mee 20, 2010 na 8: 15 PM
Enwere m obi ụtọ ịbụ akụkụ nke kacha mma Blog Tech Tech!